Kedu ihe bụ Ngwa Ngwaahịa Ntanetị Kasị Mma? - The Semalt Anwer
Ngwudata ihe ntanetị weebụ na ihe ndị e ji eme ihe iji mepụta ozi bara uru site na saịtị dị iche. Ngwaọrụ ndị a na-enye aka maka mmalite, ndị na-ede blọgụ, freelancers nakwa maka azụmahịa na nnukwu ụlọ ahịa. Ha nwere ike ma ọ bụ na-ehichapụ ma ọ bụ na-eji data ma ọ bụ na-erigbu data, na-achọta ozi ọhụrụ na nke dị na ya ma debe ya maka ịnweta ohere dị mfe.
Bixo bụ ntanetị ahịa azụmahịa na ngwaọrụ nchapu data . Ọ bụ ihe dị ike na-emepụta ihe na-emepụta ihe ntanetị nke na-agba ọsọ dịka usoro nke ịkụnye ọkpọkọ ma na-ewulite ozi gbasara gị, na-anakọta ya site na ọtụtụ isi mmalite. Ị nwere ike iji ya maka azụmahịa gị dị nta ma buru ibu ma chekwaa data bara uru na draịvụ ike gị na naanị pịa.
DEiXTo na-akpọkwa AEiXTo. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị ike na ndị a ma ama data mgbapụta ngwá ọrụ dabere na ihe zuru ezu W3C Document Ihe nlereanya. Ọ na-eme ka ị wepụ data ziri ezi ma nwee ike ịhazi faịlụ gị n'ụdị edemede. Ọ na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ nhọrọ. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike ịtọọ oge na otu esi ewepu ibe weebụ. Ọ na-azọpụta ọtụtụ oge, mgbalị, na ike.
Ụkpụrụ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ntanetị na azụmahịa kachasị mma na ntanetị weebụ. Ọ bụ isi ihe ntanetịime weebụ maka ndị ọrụ Python ma nwere ngwaọrụ ndị metụtara Wikipedia API, Google, HTML DOM parser na Twitter. Ọ bụghị naanị na ọ na-emegharị ma na-erigbu saịtị gị ma na-arụ ọrụ data bara uru ma na-ahazi faịlụ dịka ihe ị chọrọ.
Nchacha bụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na weebụ nke na-abịa na oghere na-emeghe ma na-arụ ọrụ. Ọ na-enye aka wepu data sitere na weebụsaịtị ma buru ibu na weebụsaịtị. Ndị ọrụ na-esetịpụrụ iwu maka nbudata data ma kwe ka ọgwụ na-eme ndị ọzọ. Edere ya na Python na agba ọsọ na BSD, Mac, Windows, na Linux.
80legs bụ ọrụ weebụ dị ike ma ama nke na-abịa na nhọrọ Web Crawling Web na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ nwere ike iwepu ihe ruru nde ise ibe weebụ n'otu awa, ngwugwu ya na-enyekwa ọrụ efu na-akwado ihe karịrị 12,000 URL crawls. Otú ọ dị, nsụgharị ya kachasị mma bụ maka azụmahịa ma na-efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 40 kwa ọnwa Source .